Waxaa la cusbooneysiiyaa COVID-19 Delta kala - Amjambo Africa
Waxaa qoray Kathreen Harrison
duwanaansho kala duwan les Xeerarka shaqaalaha xarumaha daryeelka caafimaadka ee shatiga leh xarunta daryeelka ee dadka naafada garaadka leh ee Maine waa in laga tallaalaa COVID-19 ugu dambayn Oktoobar 1. Xeerka deg -degga ah, oo lagu dhawaaqay Ogosto 12 -keedii, ayaa sidoo kale u baahan kuwa u shaqeeya ururada adeegga caafimaadka deg dega ah.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta caafimaadka dadka Maine, waana lama huraan inay ka taxadaraan fayraskan halista ah, gaar ahaan marka la eego halista kala duwanaanshaha Delta ee ad ka loo kala qaadi karo. Shuruudahan, waxaan ku ilaalinaynaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka, bukaannadooda, oo ay ku jiraan kuwa ugu nugul, iyo awooddayada daryeelka caafimaad.
Waxaan sii wadaa inaan si adag ugu boorriyo dhammaan dadka Maine inay is tallaalaan maxaa yeelay samaynta sidaas waxay badbaadin kartaa naftaada, nolosha xubin qoyska aga ah ama saaxiib, ama nolosha ilmo aan weli u qalmin tallaal, ”ayuu yiri Guddoomiye Mills.
“Xogta sayniska ayaa muujineysa in tallaalku uu yahay ka-hortagga ugu wanaagsan ee aan ka hortagno dhammaan noocyada fayraska keena COVID-19,” ayuu yiri Nirav D. Shah, Agaasimaha Xarunta Maine ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada.
Shuruudda cusub waxaa soo dhoweeyay isbahaysi ballaaran oo bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ee Maine oo dhan, oo ay ku jiraan Ururka Isbitaalka Maine, Ururka Caafimaadka Maine, Ururka Daryeelka Koowaad ee Maine, iyo Ururka Daryeelka Caafimaadka Maine, oo ay weheliyaan labada nidaam caafimaad ee ugu weyn gobolka, MaineHealth iyo Northern Light Health .
“In ka badan 95 boqolkiiba dhakhaatiirta iyo ku dhawaad 200 milyan oo Mareykan ah ayaa qaatay tallaal. Way iska caddahay inay ammaan yihiin oo aad wax ku ool u yihiin, ”ayay tiri Karen Saylor, MD, Madaxweynaha Ururka Caafimaadka Maine. “Kala duwanaanshaha Delta waa mid aad u dagaal badan oo hadda isbitaallada ku baahay dalka oo dhan. Shaqaalaha daryeelka caafimaad ee aan la tallaalin ayaa halis galiya bukaannada jirran iyo dadka deggan xarunta. Tani waa tallaabada xigta ee waddada mas’uuliyadda leh ee gobolkeenna oo nagu sii diyaarineysa shaqaalaha iyo booska loo baahan yahay Daryeelka dhammaan shaqaalaha Macdanta ah ee halista ugu jira jirro daran ama dhimasho. ”ine ine
Maine waa gobolka saddexaad ee ugu fiican qaranka boqolkiiba inta degganeyaasha si buuxda loo tallaalo, iyada oo in ka badan 64 boqolkiiba dhammaan dadka deggan – oo ay ku jiraan caruurta ka yar 12 weli xaq uma laha tallaal-si buuxda looga tallaalay COVID-19. Maine waxay kaloo sii wadaa inay horumar ka samayso tallaalka dadka da’da yar, iyadoo in ka badan 50 boqol kiba dhalinyarada da’doodu u dhaxayso 12 ilaa 19 si buuxda loo tallaaley.
In kasta oo ay haysato dadka da’da dhexe ee ugu da’da weyn dalka, Maine, oo loo habeeyay tirada dadka, waxay ku jirtaa kaalinta afaraad ee ugu hooseysa quraanka isbitaalka labadii toddobaad ee la soo dhaafay, sadexaad ee ugu hooseeya tirada guud ee kiisaska, iyo afaraad ee ugu hooseeya tirada dhimashada COVID-19 , sida ay sheegtay Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maine.
Meesha laga helo tallaalka vaccin Tallaallada COVID-19 ayaa lacag la’aan laga heli karaa goobaha gobolka oo dhan. Macluumaad ku saabsan helitaanka tallaalka, fadlan booqo Maine.gov/covid19/vaccines wac Khadka Tallaalka Bulshada 1-888-445-4111, ama iimayl u dir
[email protected] iyo shaqaaluhu waxay gaari doonaan COVID-19 Barnaamijka Taageerada Bulshada, oo leh shaqaale ku hadla luuqado badan.
Kuwa aan awoodin inay tagaan goobta tallaalka sabab kasta oo caqabad ah sida xannaanada carruurta ama mas’uuliyadaha daryeelidda, gaadiidka, ama arrimaha caafimaadka waxay isticmaali karaan isla macluumaadka xiriirka iyo kalkaaliso leh turjubaan ayaa ku siin doonta tallaalka guriga.
Talooyinka ku wajahan dadweynaha guud, shakhsiyaadka aan taladoodu hoos u dhicin, macallimiinta. Maine CDC waxay ku talinaysaa in marka dadku gudaha u galaan goobaha dadweynaha ay xirtaan maaskaro. Taladu waxay ku saleysan tahay koror aad u badan tirada kiisaska firfircoon ee COVID-19 ee gobolka sababta oo ah kala duwanaanshaha Delta.
Siyaasadda waxaa loogu talagalay in lagu badbaadiyo kuwa aan la tallaalin sidaas darteedna ugu badan waxay halis ugu jiraan inay aad u xanuunsadaan ama u dhintaan. Kala duwanaanshaha Delta ayaa la rumeysan yahay inuu si dhakhso ah ugu tarmo jirka marka loo eego fayruskii asalka ahaa. Shakhsiyaadka la tallaalay ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay ku faafiyaan fayraska dadka kale xitaa haddii iyaga laftoodu aysan aad u xanuunsan.
Bishii Ogosto 12keedii, FDA -da Mareykanka ayaa oggolaatay maamulka qadar dheeraad ah oo tallaalka ah oo loogu talagalay dad gaar ah oo leh hab -dhiska difaaca oo liita, oo ay ku jiraan kuwa qaata xubin -ku -tallaalid. Shakhsiyaadka u malaynaya inay u qalmi karaan waa inay la tashadaan dhakhtarkooda si loo go’aamiyo u -qalmitaanka.
Dr. Fauci, oo ah Madaxa La -taliyaha Caafimaadka ee Madaxweyne Biden, ayaa taageera waajibaadka tallaalka ee macallimiinta dugsiyada dadweynaha, hase yeeshee xilligan ma jiro gobol u baahan macalimiinta in la tallaalo. Khubaradu waxay tilmaamayaan in kala duwanaanshaha Delta uu aad ugu khatar badan yahay dadka da’da yar, si kastaba ha ahaatee caruurta ka yar 12 sano ayaan weli u -qalmin tallaalka Ogolaanshaha Mareykanka iyo talooyinka carruurta ayaa imaan kara ka hor dhamaadka 2021, sikastaba ha ahaatee.
PreviousBanaynta dariiqa aaminaadda tallaalada